Chiyero chemidziyo inoenderana pamba, inotsigirwa neApple, ichave ichiwanikwa mukupera kwa2021 | Ndinobva mac
HomeKit ndiko kupatsanurwa kweApple mukugadzirwa kwemaprotocol uye zvishandiso kuti imba yevashandisi iwedzere uye iwedzere kuchenjera uye kuzvitonga. Makambani mazhinji echitatu-bato anoburitsa michina inoenderana neKeKKit. Haasi munhu wese ane zvese kubva kuApple. Ndosaka tichida kuzadzisa chiyero chinoshanda nemapuratifomu ese. Nekudaro chirongwa cheCHIP inotsigirwa neApple iyo inogona kuona mwenje wezuva gare gare gore rino.
HomeKit ndeye Apple. Zvisinei, Amazon ine purojekiti yayo yakangofanana neGoogle. Vashandisi vanogona kushandisa chero kana ese iwo asi iwo haapindirane nemumwe, zvichiita kuti zvive kunetsekana kusarudza. Nekuti izvo zvatinoda hazviwanzo kuve zvekambani yatinoda. Iko kumwe kubatana uye kurongeka kuri kushomeka. Ndokusaka chirongwa cheCIP chakagadzirwa pakupera kwe2019. Apple pamwe neAmazon, Google uye Zigbee Alliance yakazivisa hurongwa hwekuvandudza mwero wepasirese wezvigadzirwa zvemumba zvine hungwaru, ichishandisa zvirevo zviripo seApple's HomeKit, Amazon's Alexa, uye Google's Weave.
Iyi purojekiti inovavarira kuita kuti zvive nyore kune vagadziri vezvigadzirwa kuvaka zvigadzirwa zvinoenderana nemhando dzakasiyana dzemapuratifomu epamba uye vabatsiri vezwi, nekutsanangura yakatarwa seti yeIP-based network matekinoroji ekushandisa chitupa. Iyo itsva yakavhurwa sosi standard ichave yakavakirwa paWi-Fi, Bluetooth LE uye Thread yekugadziriswa kwechigadzirwa uye kubatana.
Sezvakaburitswa muna The Verge, uye nekutenda kumusangano wepamhepo weZigbee Alliance, makambani ari kutora chikamu muchirongwa ichi Ivo vanozokwanisa kuwana zvakagadziriswa zvishandiso kubva kumagumo a2021. Mureza unowanikwa munzvimbo dzinoverengeka:
machira e mahwindo
Havana kukanganwa iyo zvishandiso zvekare uye chikuva chichagadzirwa kuitira kuti zvienderanewo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Chiyero chemidziyo inoenderana pamba, inotsigirwa neApple, ichave ichiwanikwa mukupera kwa2021
Apple TV + Animated Movie Wolfwalkers Inohwina Mashanu Annie Awards